မကျြလှညျ့ဆရာ အဘိုးအိုက မွေးမလေးကို ပေးတဲ့သငျခနျးစာ - ONE DAILY MEDIA
” မကျြလှညျ့ပညာ ဆိုတာ.. မှျောပညာ မဟုတျသလို တနျခိုးစှမျးအားတှေ မရှိပါဘူး ။ လိမျတာလညျး မဟုတျပါဘူး ။ မကျြလှညျ့ပညာမှာ လြို့ဝှကျခကျြတှေ ရှိတယျ ။ အဲ့ဒီ လြို့ဝှကျခကျြတှကေို မသိလို့သာ ခငျဗြားတို့ လာကွညျ့ကွတာ ဖွဈတယျ ။ ဒီနေ့ မကျြလှညျ့ပညာရဲ့ လြို့ဝှကျခကျြတှကေို ပွောပွပါမယျ ။ ”
” မွေးလေးရေ ပရိသတျတဈယောကျမှ မလာပါလား..? ဘာကွောငျ့လဲ..? ”
” အဘိုးက မနကေ့ပှဲမှာ လြို့ဝှကျခကျြတှေ အကုနျပွောပွလိုကျတာကိုး.. ဘယျသူက စိတျဝငျစားတော့မှာလဲ ။ ”
” အေးဟုတျတယျ မွေးလေး.. အဘိုးအိုတဈသကျလုံး ကြှေးမှေးခဲ့တဲ့ပညာ အခုတော့ လြို့ဝှကျခကျြလညျး ပွလိုကျရော ဘယျသူကမှ စိတျမဝငျစားတော့ဘူး။ တနျဖိုးလညျး မရှိတော့ဘူး ။ ”
” မွေးလေးလညျး မှတျထားပါ။ လြို့ဝှကျခကျြဖွဈတဲ့ မွေးလေးရဲ့ခန်ဓာကိုယျ အလှကိုလညျး ဘယျသူကိုမှ မပွရဘူးကှဲ့ ။ လြို့ဝှကျထားရမယျ ။ ဒါဆိုမွေးလေးရဲ့ မိနျးကလေးအလှဟာ တနျဖိုးကွီးတယျကှဲ့ ။ ”
” ဒူးဖျောပေါငျဖျော ရငျသားတှေ ပျေါနရေငျ ဘယျသူမှ စိတျမဝငျစားတော့ဘဲ တနျဖိုးမရှိ ဖွဈသှားလိမျ့မယျ ။ ပွတုနျးခဏပဲ သူတို့က တနျဖိုးထားကွတာ ဒါကွောငျ့ အဝတျစားကို လုံလုံခွုံခွုံ ဝတျပါ ။ ”
” မျက်လှည့်ပညာ ဆိုတာ.. မှော်ပညာ မဟုတ်သလို တန်ခိုးစွမ်းအားတွေ မရှိပါဘူး ။ လိမ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ မျက်လှည့်ပညာမှာ လျို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိတယ် ။ အဲ့ဒီ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို မသိလို့သာ ခင်ဗျားတို့ လာကြည့်ကြတာ ဖြစ်တယ် ။ ဒီနေ့ မျက်လှည့်ပညာရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို ပြောပြပါမယ် ။ ”
နောက်တစ်နေ့ မြေးလေးကို ခေါ်ပြီး မျက်လှည့် သွားပြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ် တစ်ယောက်မှ မလာချေတော့ဘူး ။ အဘိုးအိုက..
” မြေးလေးရေ ပရိသတ်တစ်ယောက်မှ မလာပါလား..? ဘာကြောင့်လဲ..? ”
” အဘိုးက မနေ့ကပွဲမှာ လျို့ဝှက်ချက်တွေ အကုန်ပြောပြလိုက်တာကိုး.. ဘယ်သူက စိတ်ဝင်စားတော့မှာလဲ ။ ”
” အေးဟုတ်တယ် မြေးလေး.. အဘိုးအိုတစ်သက်လုံး ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ပညာ အခုတော့ လျို့ဝှက်ချက်လည်း ပြလိုက်ရော ဘယ်သူကမှ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ တန်ဖိုးလည်း မရှိတော့ဘူး ။ ”
” မြေးလေးလည်း မှတ်ထားပါ။ လျို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့ မြေးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ် အလှကိုလည်း ဘယ်သူကိုမှ မပြရဘူးကွဲ့ ။ လျို့ဝှက်ထားရမယ် ။ ဒါဆိုမြေးလေးရဲ့ မိန်းကလေးအလှဟာ တန်ဖိုးကြီးတယ်ကွဲ့ ။ ”
” ဒူးဖော်ပေါင်ဖော် ရင်သားတွေ ပေါ်နေရင် ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားတော့ဘဲ တန်ဖိုးမရှိ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ။ ပြတုန်းခဏပဲ သူတို့က တန်ဖိုးထားကြတာ ဒါကြောင့် အဝတ်စားကို လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်ပါ ။ ”